Jarmalka Oo Ku Dhawaaqay Taageero Dhaqaale Oo Uu Siinayo Soomaaliya – Goobjoog News
Dowladda Germany ayaa sheegtay inay Soomaaliya siineyso $73 million oo taageere dhaqaale ah iyadoo ballanqaadday inay xoojineyso xiriirka u dhaxeeya labada dal. Ambassador Annett Gunther ayaa ballanqaadkan jeedisay xilli uu ka qeybgalayey xaflad Muqdisho ka dhacday oo lagu xusayey maalinta midnimada ee Jarmalka taasoo uu sidoo kale kasoo qeybgalay ra’iisul-wasaare Kheyrre.
“Innagoo ku taageereynna Soomaaliya waddada ay hayso, Germany waxay sare u qaadeysaa taageerada horumarineed iyo iskaashiga waxayna dowladda Jarmalku ku deeqeysaa Soomaaliya $73 million labada sano ee soo socota,” ayey tiri Gunther.
“Kordhintan oo sida mideysan la isugu raacay waxay xoojineysaa kobaca, xirfadaha horumarineed oo loo sii-marayo tababarro ku saabsan farsamooyinka gacanta iyo xirfadaha waxbarasho, Germany waxay ahmiyad siineysaa horumarinta reer miyiga, beeraha iyo maareynta biyaha,” ayey tiri Ambassador Gunther.
“Ujeedku wuxuu yahay in la taageero joogteynta dariiqa fiican ee ay Soomaaliya qaadday sannadihii dambe,” ayey tiri Gunther. Xafladdan oo ka dhacday xarunta Midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa lagu xusayey 29 guuradii kasoo wareegtay dib u midowgii Jarmalka oo ku beegan 3, Oct 1990.
Ujeedku wuxuu yahay in la taageero joogteynta dariiqa fiican ee ay Soomaaliya qaadday sannadihii dambe
Ankara Ucuz Kitap Kapıda Ödeme Ile Ucuz Kitap Al
En Çok Satan Yeni Kitaplar Türkiye De En Cok Satan Kitaplar
Sanal Kitap Siteleri Online Kitab Satisi
Qagalf smzytw viagra prices canadian cialis...